Workamajig: Zvemari neProjeki Management yeakagadzira maAgency | Martech Zone
China, May 15, 2014 Douglas Karr
Workamajig iri webhu-based system yekutarisira yako kushambadzira kana yekushambadzira ejensi mari uye vatengi zvirongwa. Anopfuura ma2,000 mafemu anoshandisa yavo yekushambadzira manejimendi software kune avo-mumba madhipatimendi. Workamajig inogadziriswa, yeWebhu-based projimendi manejimendi software inojekesa zvese zvinoitwa nesangano rako - kubva kubhizimusi nyowani nekutengesa zvinotungamira mukushandira nekugadzira kwekugadzira, nzira yese kuburikidza neprojekiti kutenderera kune accounting uye zvemari kutaurwa.
Zvinoumba Workamajig dzinosanganisira:
Accounting - indasitiri bhizinesi manejimendi manejimendi sisitimu inosanganisirwa neyekushambadzira projekiti manejimendi software yakagadzirirwa kushanda nezvose chaizvo zvido zvesangano rekugadzira.
Vatengi Service - chirongwa chakazara chakabatanidzwa chehurongwa chinosanganisa mabhesimendi, humbowo, bhajeti, mishumo, makarenda nekutaurirana kuita mhinduro imwe.
utsanzi - gadzirisa zviwanikwa, timesheets uye mishumo yemari inokurumidza uye yakapusa pamwe neeprojekti mafaera, mhinduro yemutengi uye zvirevo zveprojekti.
Media - otomatiki-gadzira invoice zvichibva pama media mirairo uye nekuteedzera tsamba dzeemail dzine zvinongedzo ku STRATA uye SmartPlus®.
Bhizinesi Nyowani - gadzirisa uye gadziridza vanofambidzana, makarenda, Win Pasina Pitching® yekutevera, mikana uye kuudza yako yekutengesa maitiro.
Production - mhanyisa mabhizimusi, shandura fungidziro kutenga maodha, fungidziro yemigwagwa, gadzira marongero uye zvitoro.
Traffic / Resource Management workflows iine otomatiki chirongwa chehurongwa uye chimiro
mhedzisiro, kuwanikwa kwechikwata munzvimbo dzakawanda, Gantt machati uye makarenda, uye kutema matanda pabasa.
Tags: kushambadzira agencyBillingmutengi manejimendiinofungidzirwazvemariproject managementkutenga maodhakutengesa kunotungamiramudonzvobasa
Iyo Mobile Kushambadzira Kutora